‘होटल व्यवसायको राम्रो भविष्य छ’ « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : 18 February, 2018
२०५७ तिर शिक्षण पेसामा लागेका कलम बमले २०५९ सालदेखि होटल व्यावसाय शुरु गरे । साथीभाईसंग सानोसानो ऋण सापट गरी संकलन गरेको ३० हजार रुपैयाँबाट धनगढीमा सनलाईट होटल सञ्चालनमा ल्याए । छोटो समयमा राम्रो सफलता प्राप्त गरेका बम भरखरै होटल व्यावसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष चयन भएका छन् । निरन्तरको मिहिनेत तथा लगनशीलताबाट स्थापित होटल व्यावसायी बन्न सफल अध्यक्ष बमसंग अनुमोदनले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
अध्यक्ष, होटल व्यावसायी संघ, कैलाली
धनगढीसहित कैलालीमा होटल व्यवसायको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
– कैलालीमा अहिले होटल व्यवसायको अवस्था सन्तोषजनक नै छ भन्नु पर्छ । एक दशक अघिसम्म यो क्षेत्रमा स्तरीय होटल थिएनन् । त्यसवेला ठूला कार्यक्रम, सम्मेलन नेपालगञ्जमा आयोजना हुने अवस्था थियो । अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ । धनगढी, कैलालीमा अहिले होटल व्यवसायमा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी भित्रिएको छ । अझै लगानी बढ्दो क्रममा छ । अहिलेसम्म कैलालीमा होटल व्यावसायमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि लगानी रहेको तथ्यांक छ । नौ हजार भन्दा बढी मानिसले होटलमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यसले एकातिर राज्यको राजश्वमा योगदान पुगेको छ । भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई पनि केही हदसम्म यही रोजगारी दिन सफल भएका छौं ।
कैलालीमा होटल व्यावसायको कुरा गर्दा अर्को पक्ष पनि छ । हामीकहाँ तेस्रो मुलुकबाट आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या लगभग सून्य जस्तै छ । हाम्रो नजिकै रहेको भारत उत्तर प्रदेशमा मात्रै २२ करोड जनसंख्या छ । चारपाँच घन्टाको दुरीमा भारतका ठुला शहर छन् । त्यहाँका पर्यटकलाई मात्रै हामीले भित्र्याउन सक्यौ भने यहाँको होटल व्यावसा तथा समग्र पर्यटन व्यावसाय सवल हुनेछन् । होटल व्यवसाय र पर्यटन एकअर्कासंग जोडिएको विषय हो । आधुनिक सुविधासम्पन्न होटल नहुँदा पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउन सक्दैन ।
यस क्षेत्रमा होटल व्यवसायको कस्तो भविष्य देख्नुहुन्छ ?
– हो, कैलालीमा मात्रै नभए समग्र ७ नम्बर प्रदेश मै होटल व्यावसायको भविष्य राम्रो देख्छु । ७ नम्बर प्रदेशमा प्रशस्त पर्यटकीय स्थल भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउन अझैं आधुनिक होटलहरूको खाँचो छ । होटल व्यावसाय पर्यटन व्यवसायको एउटा अभिन्न अंग हो । प्रत्येक पर्यटकका लागि हरेक ठाउँमा होटलको आवश्यकता पर्दछ । प्रत्येक पर्यटकले आधुनिक सुविधा खोज्छन् । सम्मान, राम्रो आतिथ्य सत्कार र सेवा खोज्छन् । हामीले पर्यटकलाई दिने सुविधा, सत्कार तथा सेवाले अरु पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्दछ । हाम्रा बारेमा राम्रो सन्देश प्रवाह हुन्छ । आर्थिक विकासका लागि पर्यटन विकास अनिवार्य हो भन्ने दोहोर्‍याउन पर्दैन । त्यसैले पर्यटनको द्रुत विकासका लागि स्तरीय होटलहरूको विस्तार आवश्यक छ ।
वर्तमान अवस्थामा होटल व्यावसायका चुनौतिहरू चाहीँ के देख्नु भएको छ ?
– होटल व्यवसायमा सम्भावना र चुनौति दुवै छन् । कहिले राजनीतिक द्वन्द्व, कहिले प्रशासनिक झन्झटका कारण होटल व्यवसाय मारमा पर्ने गरेको छ । बन्द, हडतालले निरन्तरता पाउँदा कतिपय होटलको लगानी नै डुब्ने अवस्था आउने गरेको छ । प्रहरी, प्रशासनको व्यवहारले पनि कतिपय होटलमा नराम्रो प्रभाव पर्ने गरेको छ । जिल्लामा नयाँ प्रहरी प्रमुख सरुवा भएर आउँदा ‘होटल चाँडो बन्द गराएर सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने’ प्रयास गर्ने गर्नुहुन्छ । यस्तो सोच र कार्यशैली उचित हो भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकि, अहिले विश्वका कतिपय विकशित मुलुकमा २४ औ घण्टा बजार खुला रहने गरेका छन् । प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन विभिन्न उपाय गर्नसक्छ, गर्नुपर्छ । कसैले मदिरा सेवन गरेर सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला गरेमा ऊ सजायको भागी हुनुपर्छ । हाम्रो समाजमा अझै अबेर रातीसम्म बजारमा आवतजावत गर्ने परिपाटी बनेको छैन । हामीले रातभरी व्यावसाय सञ्चालन गर्छौ पनि भनेका छैनौ । राती १०, ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । यस विषयमा केही दिनअघि होटल व्यावसायी संघ र जिल्ला प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासनबीच सहमतीमा १४ बुँदे आचारसंहिता लागू गरेका छौ । व्यावसायीले के गर्न हुने र प्रहरीले के गर्ने भन्ने कुरा आचार संहितामा उल्लेख छ । कानूनको अधिनमा रहेर व्यावसायीले काम गर्नुपर्छ र प्रहरीले पनि सही ढंगले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘टोलटोलमा प्रहरी’ र ‘मुस्कान सहितको प्रहरी’ जस्ता कार्यक्रममा होटल व्यवसायीको पनि प्रभावकारी सहभागिता रहेको हुन्छ । तर, प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीबाट त्यस्ता कार्यक्रमप्रति धेरै ध्यान दिएको पाइदैन ।
त्यस्तै, होटल, लजमा चेकजाँच गर्ने क्रममा पनि प्रहरीको प्रस्तुती राम्रो पाइदैन । हामी प्रहरीको सभ्य व्यवहार र प्रस्तुतिको आग्रह गर्दछै. । अर्को पक्ष आन्तरिक राजस्व कार्यालयको करबारे छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर अवैज्ञानिक छ । जबरजस्ती कर लाद्ने काम भइरहेको छ । पहिले वार्षिक १० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई पनि करमा जानु पर्ने सर्कुलर जारी भएको थियो । सानो चिया पसलको पनि वार्षिक १० लाख रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । तर, उनीहरू त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले साना व्यवसायीबाट जबरजस्ती कर असुल्नु भन्दा वैज्ञानिक रुपमा कर प्रणाली लागु गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले न्युनतम १० लाख कारोबार रकमबाट २० लाख कारोबार रकम पुर्‍याइए पनि अझैं वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । त्यस्तै, ७ नम्बर प्रदेशका अझैं पनि अधिकांस पर्यटकीय स्थलसम्म सडक पुगेका छैनन् । न विद्युत सेवा पुगेको छ न सञ्चार । त्यसैले त्यस्ता ठाउँमा होटल खोल्न व्यावसायी हिच्किचाउने गरेका छन् ।
अध्यक्षका रुपमा होटल व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि तपाईको योजना ?
– धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । म संघको महासचिव हुँदा हाम्रो कार्यसमितिले केही उपलब्धीमुलक काम गरेको थियो । मैले पहिलेदेखिका अधुरा कामलाई पुरा गर्ने सोच बनाएको छु । होटल व्यावसाय संघमा आवद्ध होटलहरूको वर्गीकरण गरेर उनीहरूको स्तरोन्नतीका लागि पहल गरिने छ । त्यस्तै होटलको वर्गीकरण अनुसार त्यहाँका कर्मचारी र सञ्चालकलाई दक्षता अभिबृद्धिमूलक तालिम दिने योजना बनाएको छु । अहिले धेरै होटलमा कामदारको अभाव देखिन्छ । धेरै युवाले होटलमा काम गर्ने इच्छा भएर पनि पाइरहेका छैनन । मैले संघलाई कामदार र व्यवसायीबीचको पुलका रूपमा उभ्याउने छ ।
होटल व्यावसायीका प्रवद्र्धनका लागि राज्यको कस्तो नीति आवश्यक छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
– महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पर्यटन व्यवसाय र होटल व्यवसायबीचको सम्बन्ध हो । प्रदेश ७ मा थुप्रै पर्यटकीय स्थल छन् । विश्वका कतिपय मुलुकले पर्यटनका माध्यमबाटै छोटो समयमै उच्च आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले हाम्रो सरकारले पनि पर्यटनको तीब्र विकासका लागि ठोस नीति लागू गर्नु आवश्यक छ ।
स्तरीय होटलको विकास र विस्तारका लागि करमा छुट, ऋणमा सहुलियत लगायतको नीति आवश्यक छ । अहिले गौरिफण्टा नाकाको स्तरोन्नतीको चर्चा छ । महाकालीमा चार लेनको आधुनिक पुल बन्दैछ । सरकारले चाढै गेटा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पहल गर्नु पर्दछ । होटल व्यवसायमा निजी क्षेत्रको लगानी बृद्धि हुने गरी सरकारको नीति आउनु पर्दछ ।